amin'ny admin amin'ny 19-12-24
Ny Airbrush Step by Step dia ny gazety ho an'ny mpanakanto rehetra amin'ny fiaramanidina fiaramanidina: manomboka amin'ny vao manomboka ka mandroso, avy amin'ny airbrusher mahazatra hatramin'ny mpanamboatra modely, vatana ary mpandika mpandika ho an'ny mpanazava amin'ny matihanina. Ny "Airbrush Step by Step" dia mikendry ireo rehetra liana amin'ny lohahevitra fiaramanidina azo tanterahina ary maniry ...
Harder & Steenbeck dia vao haingana no namatsy vola be tao amin'ny trano fanamboarana azy tao Norderstedt, Alemana. Ny milina CNC teknolojia vaovao telo lehibe indrindra tamin'ity taona ity dia tsy vitan'ny nampitombo ny fahaizany manamboatra, fa nanokatra làlana vaovao ho an'ny famolavolana vokatra, ary ny fampandrosoana. A ne ...
Iwata mpitari-dalana vaovao fiaramanidina fiaramanidina vaovao: 4 fomba azo hamafazana
"Fomba efatra ny manaparitaka" - izany no anaran'ilay foto-kevitry ny varotra vaovao avy amin'ny mpanamboatra fiaramanidina japoney Iwata. Ny orinasa dia mieritreritra ny dingana sarotra, saingy manampy indrindra ho an'ireo vao manomboka, miaraka amin'ity halehiben'ny fiaramanidina ity izay iray azonao atao ny manasokajy ho sariaka ny mpampiasa. Ny tanjona eto dia ny g ...
Ny famakafakana ny fivoaran'ny tsenam-basy mitsivalana any an-trano sy any ivelany
Ny basy Spray dia karazana fitaovana iray izay mampiasa haingana ny famoahan-tsolika avoakan'ny rivotra na manempotra toy ny heriny. Izy io dia azo ampiasaina amin'ny fanamboarana ny fanaparitahana sy fitaovana ilaina amin'ny fanaingoana ny fanaingoana. Azo ampiasaina eo amin'ny sehatry ny famelezana fiara, toy ny fanodinana fiara, fiara OEM s ...